चाणक्य नीति : यी ५ गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैनन् – Chautari Online
October 25, 2020 608
जीवनमा जो पनि सफल हुन चाहन्छ । सफलताका लागि चाहिने प्रमुख अस्त्र भनेको मेहनत हो ।
सबैको सोच सफल हुने भए पनि मानिसहरु सोच्दैनन् कि असफलताको कारण आफूमै हुन्छ । आचार्य चाणक्यले चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै कुरा उल्लेख गरेका छन्, जसलाई पालना गर्ने व्यक्ति सफल हुन सक्छ ।
सफलता प्राप्तिका लागि व्यक्तिमा केही विशेष गुण हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । यस्ता गुण भएका व्यक्ति कहिल्यै असफल हुँदैनन् ।
Prevआईतवार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ? यहाँ उल्लेख गरिएको गुण मिलो कि मिलेन हेर्नुस् !
Nextफेसबुक प्रेमः श्रीमानले विवाहित महिला लिएर भागेपछि दुधे बच्चासहित श्रीमती अलपत्र